China YG8 carbide gripper ntinye maka chuck agba emepụta na suppliers | Zhongfu Cemented
YG8 carbide gripper ntinye maka agba agba
21.6 * 9.0 * 6.3mm
ohere maka chuck agba
Ihe ntinye nke carbide siri ike
Nke gara aga: Tungsten carbide ahaziri ahaziri maka wear akụkụ na-etipịa mpịakọta
Osote: N'ogbe SPUB-63 usoro carbide osisi fanye egwe ọka carbide ntinye
Afọ ojuju ndị ahịa bụ ebumnuche anyị bụ isi. Anyị na-akwado a na-agbanwe agbanwe larịị nke professionalism, àgwà, ntụkwasị obi na ọrụ maka factory ala price China Apmt1604 Cnmg1204 Series Tungsten Carbide Inserts maka Carbon Steel Nhazi, Anyị na-na nnọọ maara nke ọma àgwà, na nwere asambodo ISO/TS16949:2009. Anyị raara onwe anyị nye inye gị ngwaahịa na ngwọta dị elu na ọnụ ahịa a na-anabata.
ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ọnụ ala China Carbide Inserts, Ntinye maka Carbon Steel Processing, Site na otu ndị ọrụ nwere ahụmahụ na ndị maara ihe, ahịa anyị na-ekpuchi South America, USA, Mid East, na North Africa. Ọtụtụ ndị ahịa aghọwo enyi anyị mgbe anyị na anyị na-emekọ ihe nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere ihe achọrọ maka ngwaahịa anyị ọ bụla, jide n'aka na ị kpọtụrụ anyị ugbu a. Anyị na-atụ anya ịnụ gị n'oge adịghị anya.
The nnọọ ọgaranya oru ngo management ahụmahụ na otu onye na-arụ ọrụ nlereanya na-eme ka elu mkpa nke azụmahịa nkwurịta okwu na anyị mfe nghọta nke gị na-atụ anya maka Hot ere maka China CNC Lathe Tools Carbide Tip Inserts Tungsten Carbide Milling Inserts Apmt1135, Site anyị ike nweta ọrụ mere. , anyị na-na na mgbe niile na gburugburu mbụ nke dị ọcha technology ngwaahịa ọhụrụ. Anyị bụ onye mmekọ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ị nwere ike ịdabere na ya. Kpọọ anyị taa maka data ndị ọzọ!
Na-ere ọkụ na-ere ọkụ maka ihe ntinye nke China Milling Carbide, Tungsten Carbide Milling Inserts, Anyị nwere ndị injinia kacha elu na ụlọ ọrụ ndị a na ndị otu na-arụ ọrụ nke ọma na nyocha. Ihe ọzọ bụ, ugbu a, anyị nwere ọnụ na ahịa Archive nke anyị na China na ọnụ ala dị ala. Ya mere, anyị nwere ike izute dị iche iche ajụjụ si dị iche iche ahịa. Cheta ịchọta webụsaịtị anyị ka ịlele ozi ndị ọzọ sitere na ngwa ahịa anyị.
N'ogbe SPUB63M30 tungsten carbide onye cutter ...
Mpempe osisi na-arụ ọrụ n'ogbe tungsten carbide i ...
Yiri ihe njide SPUB 63G na-eguzogide ọgwụ fanye carb ...
Akwa mma SPUB86M china indexable tungsten c ...
Factory N'ogbe igbe tungsten woodworking ca ...
Akụkụ Carbide Yiri, Dureza Del Titanio, Carbide Punch ma nwụọ, Nkọwapụta Cnc Machining China, Tungsten Carbide Vs Carbide, Akụkụ omenala & eyi,